Maxay Tahay Sababta Dhabta Ah Ee Ay Ciyaartoyda Xulka Qaranka Turkey Ciqaab Ugala Kulmi Karaan FIFA?Miyay Ciyaaraha Siyaasad U Badaleen? - Gool24.Net
Maxay Tahay Sababta Dhabta Ah Ee Ay Ciyaartoyda Xulka Qaranka Turkey Ciqaab Ugala Kulmi Karaan FIFA?Miyay Ciyaaraha Siyaasad U Badaleen?
Ciyaartoyda xulka qaranka Turkey ayaa talaabo laga qaadi karaa kadib dabaal degii ay sameeyeen markii ay waqtigii dhimashada ee dhamaadka ciyaarta guusha ka gaadheen xulka Albania ee kulankii Euro 2020 loogu soo baxayay.
Ciyaartoyda xulka qaranka Turkey ayaa ciqaab kala kulmi kara FIFA kadib markii ay ku dabaal degeen salaanta askarta iyada oo arintan lala xidhiidhiyay dagaalka uu dalka Turkey ku duqaynayo qayb ka mid ah dalka Syria.
Xidiga xulka qaranka Turkey ee Cenk Tosun ayaa daqiiqadii 90 aad dhaliyay goolkii uu xulkiisa Turkey ku garaacay Albania waxayna ka dul boodeen biraha xayasiiska garoonka laakiin kadib waxay bilaabeen in ay salaanta askarta kula jeedsadaan gaarayaashooda.
Laakiin arintan ayaa loo leexiyay in ay xidhiidh la leedahay duqaynta iyo dagaalka ay dawlada Turkigu ku wado dagaal yahanada Kurdiyiinta ee dalka Suuriya degan taas oo hadda keenaysa in FIFA ay arintan baadhitaan ku samayso.
Haddii ciyaartoyda xulka Turkey lagu helo arintan waxay keeni kartaa in ay ciqaab adag kala kulmi karaan FIFA iyada oo Cenk Tosun uu ka mid ahaa ciyaartoyda hogaaminaysay salaanta askarinimo ee ay ciyaartoydu bixiyeen.
Sanadkii la soo dhaafay FIFA ayaa ganaaxyo ku soo rogtay ciyaartoyda xulka Switzerland ee Meanwhile, last year Granit Xhaka, Stephan Lichtsteiner iyo Xherdan Shaqiri kadib markii ay ku dabaal degeen astaanta calanka Albania.
FIFA ayaan doonayn in ciyaartoyda kubbada cagtu ay siyaasada soo dhex galiyaan garoomada kubbada cagta waxayna ciyaartoyda Turkey la kulmi karaan ciqaab iyada oo salaanta askarinimo ee ay bixiyeen sabab u tahay in kiiskooda la baadho.
Dagaalka ay dawlada Turkigu ka wado qayb ka mid ah dalka Suuriya ayaa ah mid muran dhaliyay iyada oo la sheegay in dad shacab ah ay dhibaato ka soo gaadhay duqaymaha ay diyaaradaha Turkigu ku baacsanayaan dagaal yahanada Kurdiyiinta.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaartoyda iyo xidhiidhka kubbada cagta Turkey ayaa sugi doona haddii FIFA ay talaabo ka qaadi doonto iyo haddii ay ka badbaadi doonaan in wax ciqaab ah la mariyo.